အခမဲ့ Paypal ငွေမြွေဆိုးအွန်လိုင်း - Legit အလုပ်အဖွဲ့ Tool ကို 2018
အခမဲ့ Paypal ငွေမြွေဆိုးအွန်လိုင်း – Legit အလုပ်အဖွဲ့ Tool ကို 2018
မေ 11, 2018 စက်တင်ဘာလ 1, 2018 admin ရဲ့0မှတ်ချက်များ အခမဲ့ paypal ပိုက်ဆံ, အခမဲ့ paypal ပိုက်ဆံရဖို့ဘယ်လို, paypal နှင့်အတူအောင်ပိုက်ဆံ, paypal ပိုက်ဆံမြွေဆိုး, paypal ပိုက်ဆံမြွေဆိုး tool ကိုမီးစက် 2018
1 အခမဲ့ Paypal ငွေမြွေဆိုးအွန်လိုင်း – Legit အလုပ်အဖွဲ့ Tool ကို 2018
1.1 အခမဲ့ Paypal ငွေ Generator ကိုတကယ်အလုပ်လုပ်ပါသလား?
1.3 ငွေနှင့်အွန်လိုင်းရွေးကောက်ပွဲ Make
1.4 အွန်လိုင်းငွေရှာ, ဒေသအလိုက်ပိုက်ဆံဖြုန်း
အဆိုပါ အခမဲ့ Paypal ငွေမြွေဆိုး သင်ရိုးရှင်းစွာသင့်ရဲ့ Paypal အကောင့်ဤပိုက်ဆံဖြည့်စွက်အားဖြင့်သုံးနိုငျကွောငျးကိုမှန်ကန်ပိုက်ဆံပေးတော်မူမည်. ဤသည်မီးစက်မကြာခဏအင်တာနက်အသုံးပြုနေသည်သောသူတို့အဘို့အလွန်အကျိုးရှိသော tool ကိုဖွစျစနေို, က web ပေါ်မှာဝယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်လုံခြုံမှုအရှိဆုံးနည်းလမ်းကမ်းလှမ်းသောကွောငျ့. ဒီ app ကိုတကယ့်ကြီးမြတ်အရာဖြစ်စဉ်းစားသည်, အထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့ Paypal အကောင့်မှတဆင့်ဝယ်ယူခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းအများကြီးလုပ်ပေးတဲ့သူတွေကိုတစ်ဦးချင်းစီအဘို့. သင်အွန်လိုင်းတစ်ခုခုဝယ်ယူရန်လိုအပ်၌ရှိကြ၏ဘယ်မှာအကြိမ်ပေါင်းများစွာရှိပါတယ်, သို့သော်, ဒါဟာသိပ်နောက်ကျဖြစ်ပါတယ်ရှေ့၌သင်တို့ Paypal အကောင့်ကြောင်းကို item ဖမ်းပြီးနိုင်စေဖို့အထဲတွင်အလုံအလောက်ရန်ပုံငွေများရှိသည်ပါဘူး. အဆိုပါငွေမြွေဆိုးကသင်လိုအပ်နေဖြစ်ကြောင်းပိုက်ဆံပမာဏကိုစီစဉ်နိုင်စွမ်းပေးသည်, သင့်ရဲ့ Paypal အကောင့်ထည့်သွင်းခံရဖို့, ဒါကြောင့်သင်ဝယ်ဖို့လိုအပ်နေဖြစ်ကြောင်းဝယ်ယူစေနိုင်ကြသည်. သငျသညျရိုးရှင်းစွာသင်မီးစက်သို့လိုအပ်နေဖြစ်ကြောင်းပိုက်ဆံပမာဏကိုအတွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မယ်, ပြီးတော့သင်ချက်ချင်းကြောင့်ပိုက်ဆံသုံးစွဲဖို့နိုင်ပါလိမ့်မည်, သို့သော်, အဟောင်းမူကွဲတွေအများကြီးဖြစ်စေပိတ်ဆို့ပြီဖြစ်သောကြောင့်သင် Paypal အွန်လိုင်း Tool ကိုတစ်ဦး updated version ကိုရှိသည်သေချာရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်, ဒါမှမဟုတ်သူတို့မရှိတော့တော့ဘူးစနစ်တကျအလုပ်လုပ်. သေချာသင်လျော်သောဗားရှင်းရှိသည်ဖြစ်စေအရေးကြီးသော Itis, ဒါကြောင့်သင်အောင်မြင်စွာသင့်အကောင့်မှဒီပိုက်ဆံထပ်ထည့်နိုင်ကြသည်.
အခမဲ့ paypal ပိုက်ဆံ
အခမဲ့ Paypal ငွေ Generator ကိုတကယ်အလုပ်လုပ်ပါသလား?
အခမဲ့ Paypal ငွေမြွေဆိုးအွန်လိုင်း Generator ကိုတကယ်အလုပ်မသို့မဟုတ်မပါလျှင်အပေါ်မေးခွန်းများကိုရှိခဲ့သည်. ကကြိုးစားခဲ့ကြပြီမဟုတ်သူကိုဤမျှလောက်များစွာသောတစ်ဦးချင်းစီရှိပါတယ်, ဒီ app ကိုအလုပ်မလုပ်ပါဘူးဟုဆိုသည်နှင့်အကလိမ်လည်မှုဖြစ်ပါတယ်ကြပြီ. သို့သျောလညျး, အဆိုပါ Paypal ပိုက်ဆံ App ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပြီးဒါဟာလုံးဝအလုပ်လုပ်တယ်ကပြောသည်ကြသူအများအပြားသည်အခြားတစ်ဦးချင်းစီရှိပါတယ်. အဲဒီမှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတွေ့အကြုံကနေဒီ app ကိုအကြံပြုတဲ့သူတော်တော်များများကလူဖြစ်ရပြီသူတို့ဒီ app ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပြီးနောက်ကြောင့်အခြားသူများကိုအကြံပြုခဲ့ကြ, သူတို့အံ့အားသင့်ခဲ့ကြ, နှင့်ပျော်ရွှင်စွာကျေနပ်, သူတို့လိုခငျြသူတို့အတိအကျကိုငွေပမာဏကိုသူတို့ Paypal အကောင့်ဖွင့်ပြသကြောင်းတွေ့ရှိရကြောင်းပိုက်ဆံ၏ပမာဏထုတ်လုပ်ပြီးနောက်၎င်းတို့၏အကောင့်ကိုအမှန်ခြစ်ထားဆိုတဲ့အချက်ကိုအတူ. ဒီ app ကိုလုံးဝသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုပြောင်းလဲသွားပြီဟုဆိုသည်ကြသူအများအပြားရှိခဲ့သည်, နှင့်နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်တို့ကိုစနစ်တကျဒီ app ကိုအသုံးပြုဖို့အဖြစ်သင်လိုအပ်နေနေကြသည်သောငွေကိုမရရန်မလွယ်ကူကြောင်း. သို့သျောလညျး, သင်ကမသုံးသင့်ပါတယ်ကဲ့သို့သင်တို့ခံစားရလျှင်သင်ဖြစ်နိုင်သင့်ကိုယ်ပိုင်တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းဖြင့်သွားသင့်, သင်မခေါ်သင်ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မည်ဤနည်း.
နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်, အဆိုပါ Paypal ရန်ပုံငွေများမြွေဆိုးကသင်အသုံးပွုနိုငျဒါကြောင့်သင့် Paypal အကောင့်မှငွေကိုထည့်သွင်းဖို့လိုအပ်နေကြသောအခါအသုံးပြုရမည်ဖို့အကောင်းဆုံးမီးစက်ကဆိုသည်ထားပြီး. ဒါဟာသင်လိုအပ်နေသို့မဟုတ်ဝယ်ယူလိုသောဖြစ်ကြောင်းသင်ကသင်အွန်လိုင်းပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်လိုအပ်ပိုက်ဆံသုံးစွဲဖို့စွမ်းရည်ပေးသည်. အများအပြားကဒီ app ကိုအတုကြောင်းပြောပါမည်သူတစ်ဦးချင်းစီသို့မဟုတ်တစ်လိမ်လည်မှုသူတို့ရဲ့များမှာသော်လည်း, သင်အမှန်တကယ်ထဲသို့ချွတ် step မီဤကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုသို့ကျဆင်းယူမီသင့်လျော်သောသုတေသနပြုသေချာစေရန်အစဉ်အမြဲအရေးကြီးသည်. ရုံသငျသညျကွိုးစားပါစေခြင်းငှါအခြားမည်သည့်သစ်ကိုအရာတွေနဲ့တူ၏, အဆိုပါ free paypal ပိုက်ဆံ သင်ဤလမ်းပိုက်ဆံရရှိမှုအတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင်သင်ကြိုးစားရန်အကောင်းဆုံးအရာဖြစ်စေခြင်းငှါ,. လူအတော်များများသငျသညျကို PayPal နှင့်အတူငွေရှာနိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုတွေးမိ. PayPal ကအွန်လိုင်းမှငွေပေးချေသည့်စနစ်ဖြစ်ပါသည်, ရုံအကောင်းဆုံးကတော့နဲ့တူ, ဒါပေမယ့် Paypal ဖြင့်သင်တို့ကိုအကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်နိုင်ပြီးတခြားအကောင့်ကိုင်ဆောင်သူအနေဖြင့်ငွေပေးချေမှုလက်ခံရယူ. ချိန်ခွင်လျှာသင့်ရဲ့ဘဏ်အကောင့်သို့ပြောင်းရွှေ့ရနိုင်, သို့မဟုတ်အမျိုးမျိုးသောဝဘ်ဆိုင်များမှာအွန်လိုင်းငွေပေးချေမှုများအတွက်သုံးလို့.
PayPal ကနိုင်ငံတကာမှာလုပ်ကိုင်, အလွယ်တကူကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်အွန်လိုင်းပိုက်ဆံလက်ခံရရှိရန်ဖြစ်နိုင်အောင်. PayPal ကမှတဆင့်၎င်းတို့၏အဖွဲ့ဝင်များကပေးဆောင်များစွာကိုဝဘ်ဆိုဒ်များရှိပါတယ်, ထိုကဲ့သို့သောသင်ဤစာမျက်နှာပေါ်တွင်ရှာတှေ့နိုငျသောဆိုဒ်များအဖြစ်.
အကြီးစားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြော်ငြာကုမ္ပဏီများနှင့်တွဲဖက်ကွန်ရက်များကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်, ဒိုမိန်းယာဉ်ရပ်နားန်ဆောင်မှုများနှင့်အများအပြားတစ်ဦးချင်းစီ Affiliate နှင့်ပြန်လည်ရောင်းချသူများအစီအစဉ်များအပါအဝင်. နံပါတ်နယ်သာလန်နိုင်ငံလည်းရှိပါတယ်.
Paypal ဖြင့်ငွေရှာဖို့အရှိဆုံးသိသာနည်းလမ်းတွေတစ်ခုမှာ Marketplace နဲ့ eBay မှာရောင်းချနေမှတဆင့်ဖြစ်ပါတယ်. PayPal ကအစဉ်အဆက်တို့သည်လူကြိုက်များလေလံ site ကိုကို eBay များအတွက်ငွေပေးချေမှုစနစ်အားအဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ပြီး, နှင့်ယနေ့ခေတ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ငွေပေးချေမှုစေရန်လုံခြုံလမ်းအဖြစ် Marketplaces အပေါ်လည်းအသုံးပြုပါသည်. ဈေးယခုကို eBay ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်.
ဖြည့်စွက်ကာ, ကြော်ငြာအားမရအတွက်ဝက်ဘ်မာစတာပေးဆောင်များစွာကိုအမေရိကန်ကုမ္ပဏီများသည်. အဆိုပါမာစတာကိုကလစ်နှိပ်နှုန်းတစ်အခကြေးငွေအားလက်ခံတွေ့ဆုံ, အထင်အမြင်နှုန်း, ခဲနှုန်းသို့မဟုတ်ရောင်းချခြင်းနှုန်း. အစဉ်အလာ, အဲဒီကုမ္ပဏီတွေကအမြဲ Paypal ကနေတစ်ဆင့်ပေးချေပေမယ့်တစ်ဦး BIC ကုဒ်တွေနဲ့ IBAN ကနေတဆင့်လည်းလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်.
အခမဲ့ PayPal ကငွေလက်ကျန်ငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့
သင်ဖျောပွဆိုဒ်များတဦးပါဝင်ခဲ့ဖူးနှင့်သင့်ဝင်ငွေရရှိမှု PayPal ကတဆင့်ပေးဆောင်ခဲ့ကြ? ထိုအခါသင်သည်၏သင်တန်းသင့်ရဲ့ဘဏ်အကောင့်မှငွေကိုလွှဲပြောင်းနိုင်, သင်မူကားချိန်ခွင်လျှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းအားဖြင့်အနာဂတ်တွင်ပိုမိုဝင်ငွေ generate နိုင်သည်ကိုသေချာစေရန်နည်းလမ်းများလည်းရှိပါတယ်.
သင့်အကောင့်လက်ကျန်ငွေနှင့်တကွသင်ထိုကဲ့သို့သောဒိုမိန်းအမည်နှင့်ကို web hosting အတွက်အဖြစ်အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများယ်ယူနိုင်ပါသည်. ဤသည်သင်၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းဆိုဒ်များမြှင့်တင်ရန်သင့်ကိုယ်ပိုင်က်ဘ်ဆိုက်ဖွင့်တင်ထားရန်ခွင့်ပြု. နောက်ပိုင်းတွင်သင့်ရဲ့ website မှဧည့်သည်များဆွဲဆောင်နိုင်ရန်အတွက်, သင်သည်သင်၏ Paypal ချိန်ခွင်လျှာနှင့်အတူကြော်ငြာအာကာသယ်ယူနိုင်ပါသည်.
တချို့ကက်ဘ်ဆိုက်များသင့်အကောင့်ကို upgrade လုပ်ဖို့ option ပူဇော်. သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်အခြို့ငွေပမာဏကိုပေးဆောင်ခြင်းနှင့်ပြန်သင့်အကောင့်အများကြီးအပိုဆောင်းအကြိုးခံစားခှငျ့မြားနှငျ့ပရီမီယံသို့ကူးပြောင်းနေသည်. အများအားဖြင့်, ဒါပေမယ့်မအမြဲ, ဤသူသည်သင်တို့လည်းပိုပြီးဝင်ငွေဆိုလိုနိုင်ပါတယ်, တခါတရံသင်သည်လည်းအခမဲ့ကြော်ငြာအခွင့်အလမ်းများရ. သင်တစ်ဦးအဆင့်မြှင့်ဝယ်ယူရန်ဆုံးဖြတ်မတိုင်မီအမြဲတမ်းကောင်းစွာအကြောင်းကြားရမည်.
အီးမေးလ်လိပ်စာအီးမေးလျဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်အိမ်ရဲ့မျက်နှာစာမှာရှိတဲ့ box ထဲမှာမဆိုဒင်္ဂါးပြားများနှင့်ဥပဒေကြမ်းများရှိနေကြသည်မဟုတ်နေစဉ်, သင်ဤအတူပေးဆောင်နိုင်ပါတယ်. PayPal က၏ရလဒ်အဖြစ်, ပုံမှန်သုံးစွဲဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေကန့်, သင်အွန်လိုင်းရွေးကောက်ပွဲနှင့်အတူငွေရှာနိုင်အမှု၌ကျပန်းအီးမေးလ်လိပ်စာ, ကရကချွတ်ပေးဆောင်.
တစ်ခုခုကိုပိုင်ရှင်ရိုးရိုးအင်တာနက်ပေါ်ရှိပိုက်ဆံရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ပါတယ်, အများဆုံးက web စတိုးဆိုင်များ PayPal ကမှတဆင့်ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံသောကြောင့်,. သူကသူ့ဘဏ်အကောင့်အားမိမိ PayPal ကအကောင့်မှငွေလွှဲပြောင်း.
တစ်ဦးက PayPal ကအကောင့်လည်းသာလျှင်အထူးဘဏ်အကောင့်ဖွစျစနေို
တစ်ဦးက PayPal ကအကောင့်ရုံတစ်ဘဏ်အကောင့်ဖြစ်ပါသည်. အကျိုးဆက်, တဦးတည်းကိုစတင်ချင်ပါတယ်တဲ့သူတစ်စုံတစ်ယောက်, check လုပ်ထားအပြင်, သူကငွေသားအဘို့အဖြေနှင့်အမြင်ရွေးကောက်ပွဲကနေအိမျတှငျပိုက်ဆံစေသည်မှာအနည်းဆုံးရသောအခါ. ယေဘုယျအားဖြင့်, တစ်ဦး Schufa အသနားခံစာကိုဖန်ဆင်းနိုင်ပါသည်. PayPal ကအသစ် client ကိုကိုယ်တိုင်တရားဝင်သူဖြစ်မလုပ်ပဲသောသူသည်သက်သေပြဖို့ရန်လိုအပ်ပါသည်. သူ့အကောင့်မှအတည်ပြုပြီးဖြစ်ပါတယ်.
ကံကောင်းစွာ, ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်. ထိုအချိန်ကာလ၏ Majority, PayPal ကအလွန်သေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏကိုလွှဲပြောင်း, တစ်ရာခိုင်နှုန်းလို့ပြော, တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ပုံမှန်ဘဏ်စာရင်းမှ, အသစ်တစ်ခုကို PayPal အကောင့်ဖွင့်လှစ်ရာ. သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုကုဒ်အချက်ပြနေသည်နှင့်အမျှ. ဒီ code အွန်လိုင်း PayPal ကတဆင့်ငွေဝင်ငွေလက်ရှိတွင်တစ်ခုဖြစ်ပါသည် , စီးပွားရေးလုပ်ငန်း site ပေါ်တွင်. သူသည်လက်ရှိတွင်တရားဝင်ဖွင့်ခြင်းနှင့် paid မေးခွန်း reply မှအလေးအနက်ထားသည်သူ၏အခမဲ့အမြင်သုံးနိုင်ပါသည်.
သငျသညျအမြင်ရွေးကောက်ပွဲနှင့်အတူအွန်လိုင်းငွေရှာတဖန်သင်တို့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူလျှင်သင်တို့၏ခိုင်ခံ့ထင်မြင်ချက်များဆွေးနွေးရန် အကယ်., အချို့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီးသင်မှတ်ချက်ရာထူးနှင့်အတူစာရင်းသွင်းင့်ထားတဲ့နှင့်အတူအီးမေးလ်မိန့်ခွန်းသင်၏ PayPal လိပ်စာနှင့်အတူကိုက်ညီ. တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ်, သငျသညျကို PayPal နှင့်အတူအပိုအီးမေးလ်လိပ်စာများငွေသွင်းခြင်းနှင့်ဒေသဆိုင်ရာအကောင့်သူတို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်သည်.
အွန်လိုင်းငွေရှာ – ထောင့်လှည့်လည်အဆိုပါ store မှာပိုက်ဆံရင်းနှီးမြှုပ်နှံ, ဒါ့အပြင်ပိုပြီးမကြာခဏ PayPal ကအတူလည်ပတ်သော. အထူးသမြို့ကြီးများတွင်ခုနှစ်တွင်, စတိုးဆိုင်များနှင့်ဆိုင်များတစ်ခုတိုးပွားလာဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုက်ဆံအိတ်နှင့်အတူငွေပေးချေမှုလက်ခံနေကြတယ်. PayPal ကလည်းပဲကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိမိတ်ဆွေများကိုသို့မဟုတ်ဆွေမျိုးမှငွေသားပေးပို့ခြင်းတွေအတွက်အကူအညီနိုင်ပါတယ်. ဒါဟာဒုတိယ၏အပိုင်းအစအတွက်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်. သငျသညျကောငျးမှနျစှာကအသုံးချနိုင်သူတစ်စုံတစ်ယောက်ဖို့ဆုကိုပေးတစ်ချိန်ကထို့ကြောင့်စစ်တမ်းများနှင့်အတူငွေရှာပိုပြီးပျော်စရာဖြစ်ပါတယ်.
“ငါက၎င်း၏ဒါ legit ဒီ paypal ပိုက်ဆံမီးစက် အသုံးပြု. လူနေမှုများအတွက်ငွေအလုံအလောက်လုပ် 2018, ဒါပေမယ့်ငါအိပ်မက်ကိုမြင်မက်, တစ်ဦးအမှတ်တံဆိပ်အသစ်က Mercedes-Benz ကိုဝယ်ခြင်းငှါခဲ့သည့်. ငါကစူပါစျေးကြီးကြီးသိတယ်နဲ့ကျွန်မနှစ်ကတက်သည်ကယ်တင်ရန်ရှိသည်ချင်ပါတယ်. သို့သျောလညျး, ဤအမှုသည်ငါ့ထံဒဏ်ငွေခဲ့သည်. နောက်ဆုံးတော့, ဒါဟာအိပ်မက်ခဲ့, နှင့်သင်ရုံသင့်ရဲ့အိပ်မက်တစ်ရက်သို့မဟုတ်နှစ်ခုအတွက်စစ်မှန်တဲ့လာစေမနိုင်. ကောင်းစွာ, ဒီငါအချိန်တွင်ထင်ဘာလဲ…
နှစ်အနည်းငယ်အတွက်, ဘဏ္ဍာရေးအကျပ်အတည်း လာ. ,. ဒါဟာဒီဇင်ဘာလခဲ့သည် 2007, စျေးနှုန်းတွေတက်ခုန်တက်, လူတွေထိတ်လန့်ရှိကြ၏. ငါတကယ်ဆုံးရှုံးဖို့ဘာမျှမခဲ့, ဒါကြောင့်ကိုယ့်ခါတိုင်းလိုအဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်သွား…
သို့သျောလညျး,3လများကပိုလွန်, နှင့်ကလေးများငါဒေဝါလီခံလှည့်မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ဆိုင်ဝတ်ဆင်, ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာကျနော်ခဲ့သည်, မှာအားလုံးအလုပ်မဟုတ်သလိုဝင်ငွေသတင်းရပ်ကွက်အဘယ်သူမျှမနှင့်အတူ, ကျွန်မရဲ့မိဘတွေအပေါ်အသက်ရှင်ရန်ရှိခြင်း’ စုထားသောငှေ.
ဤရွေ့ကားအမှန်တကယ်အလွန်ဝမ်းနည်းဖွယ်ကြိမ်ခဲ့ကြသည်. ငါအင်တာနက်ပေါ်ရှိမည်သည့်ဖြစ်နိုင်သောအလုပ်အခွင့်အလမ်းများအတွက်အသည်းအသန်ရှာဖွေနေခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်နီးပါးနှစ်လပြီးနောက်, မှာအားလုံးအဘယ်သူမျှမရလဒ်များကိုရှိခဲ့သည်.
လွန်နောက်ထပ်နှစ်ပတ်, ရှိသမျှကိုငါမျှော်လင့်ချက်စွန့်လွှတ်ခဲ့, ထို့နောက်ရုတ်တရက်ကျွန်မဝဘ်စာမျက်နှာသို့ကြည့်ရှု. ဤသည်ရရှိခဲ့ဖူးသူတစ်ဦးကောင်လေးအကြောင်းကိုပုံပြင်တစ်ပုဒ်ခဲ့ $5,000 ငါတို့အားဖြင့်ဖန်ဆင်းတော်ဤလျှောက်လွှာကို အသုံးပြု. အွန်လိုင်း, မိမိအကွန်ပျူတာများ၏ရှေ့မှောက်၌, ပင်သူတှငျနထေိုငျအိမျတျောကိုစွန့်ခွာခြင်းမရှိဘဲ!” – အမည်မသိ
[လမ်းညွှန်] ငွေအွန်လိုင်းစေရန်နည်းလမ်းများ 2018 →